လိုငွေပြ ဘတ်ဂျက်ကြောင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ရုံးများကို လွှတ်တော်မှ တာဝန်ယူ ဖွင့်လှစ်ပေး?? - Yangon Media Group
လိုငွေပြ ဘတ်ဂျက်ကြောင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ရုံးများကို လွှတ်တော်မှ တာဝန်ယူ ဖွင့်လှစ်ပေး??
နိုင်ငံတွင် လိုငွေပြဘတ်ဂျက်ဖြင့် လည်ပတ် နေရသောကြောင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးများကို လွှတ်တော်မှတာ ဝန်ယူဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏လွှတ်တော် အခွင့်အရေးကော်မတီအတွင်းရေး မှူးဒေါက်တာလှမိုးက ပြောသည်။ ဇန်နဝါရီ၂၆ရက် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအ ဝေးတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းသီဟကျော်က လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးများကို မည်သည့်ကာလတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ပေးမည်၊ နေရာထိုင်ခင်းနှင့် ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်များအား လွှတ် တော်ရုံးမှ ကျခံဆောင်ရွက်ပေးရန်မည်သို့စီမံထားသည်ကိုသိလိုကြောင်း မေးမြန်းမှုအပေါ် လွှတ်တော်အခွင့် အရေးကော်မတီကိုယ်စား ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာလှမိုးက ပြောခြင်းဖြစ်သည်။
”လွှတ်တော်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးများကို တာဝန်ယူဖွင့် လှစ်ပေးမယ်ဆိုပါကလည်း မဲဆန္ဒနယ်ပေါင်း၃၃ဝအတွက် တစ်ပြိုင်နက်တည်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် နေရာရှာဖွေရခြင်း၊ အ ဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ရ ခြင်း၊ ရုံးလုပ်ငန်းအသုံးအဆောင်များ ဖြည့်တင်းဆောင်ရွက်ရခြင်း၊ ရုံးဝန်ထမ်းခန့်အပ်ခြင်းတွေကိုပါ တစ် ပြိုင်နက်တည်း ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် လုပ်ငန်းပမာဏကြီးမားသလို ဘဏ္ဍာငွေအမြောက် အမြားသုံးစွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်များ သိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံမှာ လိုငွေပြဘတ် ဂျက်ဖြင့် လည်ပတ်နေရတဲ့ကာလ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘဏ္ဍာငွေအခက် အခဲရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဘဏ္ဍာရေး ကော်မရှင်ရဲ့ ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေချထား ပေးမှုအပေါ် မူတည်ပြီးဆောင်ရွက် ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် လတ်တလော အနေနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ရုံးများကို လွှတ်တော်မှတာဝန်ယူ ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ”ဟု ဒေါက်တာလှမိုးကပြောသည်။
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများနှင့် တွေ့ဆုံရန်၊ ဌာနဆိုင်ရာများဖြင့် ရုံးလုပ်ငန်းသဘော ဆောင်ရွက်ရန် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးများဖွင့်လှစ်ရန် အမှန်တကယ်လိုအပ်လျက်ရှိကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိုင်းသီဟကျော်က ပြောသည်။ ”အချို့သောတတ်နိုင်တဲ့ကိုယ် စားလှယ်များကတော့ ရုံးလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်များကို မိမိဘာသာကျခံပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးများ ဖွင့်လှစ်နိုင်ကြပေမယ့် အချို့သောကိုယ်စားလှယ်များက တော့ ရုံးဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ မြို့နယ်တစ်ခုမှာ ပြည်သူ့လွှတ် တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ တိုင်း ဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များရှိကြတော့ စု ပေါင်းဖွင့်လှစ်ထားတာလည်း ရှိပါတယ်။ ပါတီတူညီကျရင်တော့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကျပေမယ့် ပါတီမတူရင် ရုံးလုပ်ငန်းကုန်ကျစရိတ်အတွက် အဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ ရပါတယ်”ဟု ဦးစိုင်းသီဟကျော်ကဆိုသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ၆၄တွင် လွှတ်တော်သည် လိုအပ်သောမြို့နယ်များတွင် လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးများကို ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ဟုဖော်ပြထားကာ ပုဒ်မ ၆၅တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ရုံးများကို လွှတ်တော်ကတာဝန်ယူ ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးမီ လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် မိမိအစီအစဉ်ဖြင့်ဖွင့်လှစ်လိုပါက နေရာ ထိုင်ခင်း၊ ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကုန်ကျ စရိတ်များကျခံ၍ လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်ရုံးများကို ဖွင့်လှစ်နိုင်ဟု ပါရှိကြောင်း သိရသည်။
ဒိုင်ကို ရန်ပြုခဲ့ခြင်းကြောင့် နောက်ခံလူ အဲလ်ဗက်စ် သုံးပွဲ ပယ်ခံရ